Mapurisa & zvekushandisa zvemauto - China Mapurisa & zvekushandisa zvemauto Vagadziri, Vanopa
SR223B UAV yekuona radar
1.Product basa uye shandisa SR223 radar inowanzo sanganisira 1 radar array, 1 yakasanganiswa control box uye 1 turntable. Iyo inoshandiswa pakuona, kunyevera uye kunongedzera chiratidzo cheadiki / madiki evagari madhoni munzvimbo dzakakosha senge majeri, kuratidzira, uye zvigadziko zvemauto. Iyo trajectory ruzivo senge chinzvimbo, chinhambwe, kukwirira uye kumhanya kwechinangwa kunopihwa. 2.Main chigadzirwa maratidziro Item Performance parameter Basa system Yakagadziriswa arongwa system (azimuth muchina scan + pani phas ...
Pfupiso: LT-600 Desktop ine ngozi mvura detector irudzi nyowani yengozi yemvura detector. Unyanzvi uhu hwasvika padanho repamusoro.Chigadzirwa chinogona kuona otomatiki zvinokuvadza, zvinoputika uye zvinoparadza zvine njodzi uye zvinodzivirira zvinwiwa zvine zvinwiwa zvine njodzi (izvo zvinogona kukonzera kupisa kana kuputika) kupinda munzvimbo yekuchengetedza. Inzvimbo inodiwa yekuyedza chengetedzo yezviteshi, nzira yepasi pevhu, vamiririri vehurumende, nhandare nedzimwe dzakazara vanhu uye dzakashata ...
W38M Kuputika Kunoparadza
1.Overview W38M Explosive kukanganisa inowanzo shandiswa pakuparara kwezvipuka kana kusazivikanwa kurongedza. Iyo inogona kusangana nezvinodiwa zvekuchengetedza kana mapurisa akasarudzika achitora kupokana nehugandanga EOD mabasa. IW38M inogona kubvisa njodzi iyi uye nekuona kuchengetedzeka kwemapurisa kwakakosha. W38M Kuvhiringidza kuputika kunogona kushandiswa mumamiriro ezvinhu apo pane kusazivikanwa kuputika. Iyo yakachengeteka, yakavimbika uye yakasimba simba rekuparadza. 2.Specification Saizi: 500mm * 440mm * 400mm Kurema: 21kg Launcher kureba: 500mm Launcher dhayamita: ...
Iyo inopenya kubvisa nhoo inosanganisirwa neacousto-optic ichipararira, iyo ine mabasa ekupenya kupenya uye sonic ichipararira zvakateerana, uye inogona zvakare kushandiswa sekuraira uye kutungamira propaganda. Batidza switch yemagetsi yenhoo, iyo mita yekuratidzira yemagetsi inowanzo kuratidza iwo magetsi (kuratidza 10 ~ 12V), ipapo unogona kushandisa simba rakasimba rinopararira, kurira kwemasaisai kuchipararira uye kudeedzera mashandiro. Iwo maviri ekuparadzira mabasa anogona kushanda zvakasiyana kana panguva imwe chete. Ona ...
TS-Micro inotakurika gudzanzwi system (LRAD Yakareba renji acoustic chishandiso)
Chigadzirwa Chigadzirwa: Gudzanzwi rinotakurika chishandiso chakangwara chekudzivirira kuparadzira boka revanhu pasina kubata uye kukuvadza. Iyo yakagadzirirwa kusangana chero nezve chero hunyanzvi hwekushanda kana mhinduro yechimbichimbi inoda zvinonzwisisika zvinonzwisisika toni yambiro uye meseji meseji. Chigadzirwa chinogona kuburitsa ruzha rwakasimba zvinoita kuti zviome kwazvo kuti vanhu vagare vakatenderedza vasina dziviriro. Ichi chigadzirwa chinopa ekuchengetedzwa kwemutemo maofficial neasingaonekwe emhando yepamusoro-simba ruzha pamadziro ...
ER3 (M) EOD robhoti
Ongororo EOD marobhoti anonyanya kushandiswa kubata nemabhomba-ane hukama mabasa, uye anogona zvakare kushandiswa kuona nzvimbo inonetsa kuti vanhu vasvike. Iyo 6-degree-of-freedom EOD manipulator inogona kutenderera chero kona, uye inogona kubvutira zvinhu zvinorema kusvika 55KG. Chassis inotora chinokambaira + kaviri swing ruoko chimiro, icho chinokwanisa kuchinjika kumatunhu akasiyana siyana uye nekukurumidza kurwisa kuendesa. Panguva imwecheteyo, iyo robhoti yakagadzirirwa tambo yekudzora uye inogona kushanda iri kure kuburikidza newaya pasi petiweki mukati ...
ER3 (H) EOD robhoti
Ongororo EOD marobhoti anonyanya kushandiswa kubata nemabhomba-ane hukama mabasa, uye anogona zvakare kushandiswa kuona nzvimbo inonetsa kuti vanhu vasvike. Iyo 6-degree-of-freedom EOD manipulator inogona kutenderera chero kona, uye inogona kubvutira zvinhu zvinorema kusvika ku100KG. Iyo chassis inotora chinokambaira chimiro, icho chinogona kuchinjika kune dzakasiyana siyana terrains uye nekukurumidza kurwisa kuendesa. Irobhoti yakagadzirirwa Optical fiber otomatiki waya transmitter, iyo inogona kudzorwa iri kure newaya kuitira kana network interf ...
ER3 (S-1) EOD robhoti
Ongororo EOD marobhoti anonyanya kushandiswa kubata nemabhomba-ane hukama mabasa, uye anogona zvakare kushandiswa kuona nzvimbo inonetsa kuti vanhu vasvike. Iyo 6-degree-of-freedom EOD manipulator inogona kutenderera chero kona, uye inogona kubvutira zvinhu zvinorema kusvika 10.5KG. Chassis inotora chinokambaira + kaviri swing ruoko chimiro, icho chinokwanisa kuchinjika kumatunhu akasiyana siyana uye nekukurumidza kurwisa kuendesa. Panguva imwecheteyo, iyo robhoti yakagadzirirwa tambo yekudzora uye inogona kushanda iri kure kuburikidza newaya pasi pemambure int ...
36 Piece EOD Isina-Magineti Chishandiso Kit
Iyo isiri-magnetic chishandiso kit inonyanya kushandisa beryllium bronze sechinhu chikuru zvinhu, uye ndeyenyika yenyika IIC giredhi chigadzirwa. Inoshanda mune yakasungwa ye21% hydrogen uye haina kudzikisira gasi. Nekuti magnetism yeiyo beryllium bronze zvinhu iri zero, iyo beryllium bronze chishandiso inonzi zvakare isiri-yemagineti chishandiso, inogona kuve iri mune yemagineti. Zvakatipoteredza mabasa. Kana vashandi vekuputika varasa zvinhu, maturusi anogona kudzivirira ma spark anoparadzirwa wh ...